Col. Cabdullahi oo bilaabay dabagal ku dhisan Heybsoocid
Buluugleey, Wednesday, October 05, 2005
Hogaamiyeyaasha Soomaalida oo marka ay la soo deristo waxqabad la’aan summad ka dhigta eedeynta dadka ku hebta ah madaxdii uga horeysay maamulka. Dr. Culusow ayaa wuxuu u noqday tilmaan la beegsado, kadib markii ay beeshiisu u muuqatay iney halis ku tahay siyaasada Col. Cabdullahi Yusuf. Gudoomiyaha Bangiga Dhexe oo markiisii hore lagu soo xulay shaxda qabiil wax ku qeybsiga lagu dheeli tirayo ayaa si aan raacsaneyn hab dowladeed iyo mid qanuun ayaa waxaa xilkii looga fadhiisiyey arrimo la xiriira heybta uu ka soo jeedo.
Siyad Barre ayaa bartilmaameed ka dhigtay beesha degta gobolka Bari oo uu u arkayey iney halis ku tahay jiritaanka dowladiisa.. Dadka ka soo jeedey gobolkaas oo xilal ka hayey dalka ayaa lagu bilaabay dabagal kadib markii 1976 ku dhowaaqidii xisbiga hantiwadaaga uu ku fashilmay labakacleyntii loo qorsheeyey inuu dib u soo celiyo tageerada dadweynaha ay u hayeen kacaanka oo marayey heer aad u hooseyey. Eeda loo soo jeediyey dadkaas aan waxba galabsan oo u badnaa arday iyo shaqaale ka tirsan bulshada rayidkaa, ayuu doorbiday kelitaliyihii dalka xukumayey inuu ka dhigto bartilmaameed si carrada dadweynaha uu ugu jeediyo naceybka ay u qabaan qabiilka dega gobolka Bari, taas oo dhalisay sannooyinkii ka dambeeyey xasuuq iyo xaqiraad lagula kacay dadweynahaas Soomaaliyeed.
Hogaamiye kooxeedyadii Jabhadaha USC, SNM, iyo SSDF ayaa halgankii ay kula jireen Siyad Barre waxey u rogeen dhinaca dadweynaha ku hebta ah kelitaliyaahaas oo iyagu ahaa rayid aan waxba galabsan. Dhibaatada lagu hayey dadka ka soo jeedey gobolka Gedo waa ay socotey xataa kadib markii dalka laga cirdeeyey kelitaliyihii Siyad Barre. Siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada Bari ayaa u adeegsaday kooxaha ka jirey Xamar oo ay ku daldalayeen hub si fekerkooda ku aadan la dagaalanka Siyad Barre uu u meel maro iyagoo gacnahooda ka badbaadiyey iney galaan dagaal dadkoodu ku hoobto.
Col. Cabdullahi ayaa hadda u muuqda mid laga dhaadhacsiiyey in ay si adag uga soo horjeedaan beesha ku heybta ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya ee lagu soo dhisay Carta, ayna ku yihiin halis siyaasadiisa uu ku damacsan yahay inuu ku xukumo dalka Soomaaliya. Waxey Col. Cabdullahi hadda ka hor isku dhaceen Col. Xassan Dahir Aweys oo ay ku dagaalameen gobolka Bari oo Cabdullahi uu ka wadey xasuuq uu ku hayey culimada islaamka ee u dhashay gobolkaas, waxaana labadaas hogaamiye dhexmartay colaad dimeed iyo dagaalo afka ah oo ay weli si joogtaa isugu hayaan isuguna gudbiyaan idaacadaha. Waxaa sidoo kale marar badan ka soo yeertay garabka Jowhar in siyaasyiinta ku heybta ah Dr. Qaasim ay wadaan majaxaabinta lagu hayo maamulka Cabdullahi Yusuf oo ku go’doomay degmada Jowhar. Haddii laga hadlayo wadaadada ama hogaamiye kooxeedyada kelitaliska ah ee ka jira gobolada dalka, ama saraakiisha sare ee XDS, waxey had iyo jeer bartilmaameed ka dhigtaan kooxda Jowhar shaqsiyaad ka soo jeeda beeshaas.
Cabdirisaaq Juriile ayaa colaad xoogan u hayey Dr. Qaasim xiligii ay labadooduba ku kala tartamayeen, xusul duubna ugu jireen u adeegida Siyad Barre. Juriile ayaa waxaa xilkii uu ka hayey jaamicadda ka xayuubiyey Dr. qaasim markii la xaqiijiyey qiil tilmaamaya inuusan kala imaan wadanka Hungry oo uu ugu maqnaa waxbarasho wax cadeynaya shahaado cilmiga uu sheeganayo loogu aqoonsaday iyo isagoo markaas loo arkayey kansar qabiilka ku fidinaya Jaamacada gudaheeda.
Nin ay isku heyb yihiin Dr. Culusow oo ku nool dalka Mareykanka oo magaciisa lagu sheegay Dr. Saciid Ciise Maxamud ayeysan u muuqan mira dhalka siyaasada garabka Jowhar, isaga oo aad uga soo horjeeda in taageero laga raadiyo Itoobiya oo Soomaalida ay ku hayaan indho shaki badan iyo Col. Cabdullahi Yusuf oo uu u arko in siyaasadiisa soo jirtey ay marqaati ka tahay dumin, dagaal, iyo diidmo badan. Inkastoo Dr. saciid uusan ahayn nin wadaada ama uusan raacansaneyn xukuumad diineed, haddana maamulka Cabdullahi Yusuf wuxuu u arkaa mid aan dowladnimo iyo dimoqaraadiyad midna aan ka hirgelin karin dalka Soomaaliya. Shaqsiyaad badan oo colaad qabiil qaba ayey suurtogal u noqon kartaa oo keliya in dhaqanka Col. Cabdullahi iyo maamulkiisu ay u suurto geliso xukun ku dhisan kala aarsi.
Dr. Culusow ayaa lagu tijaabiyey naceybkii soo jiitamayey ee loo hayey heybtiisa, isagoo markii loo magacaabayey jagadaas ku diidey fekerka ay u soo jeedisey beeshiisu oo ahaa inuusan qaadan xilkaas. Dr. Culusow oo u muuqday inuu dhexdhexaad ka ahaa awood isku qabsiga ka dhexeeyey kooxaha Muqdisho iyo Jowhar ayey heybtiisu u keentay in xilka laga qaado isaga oo ku howlan waajibka ka saran gudashada xilka uu u hayo dadwynaha Soomaaliyeed. Dabagalka sinji raaca ah ee lagula kacayo madaxda aan xataa ku fekerka ahayn siyaasiyiinta kale ee beeshooda ayaa u muuqda inuu noqonayo hab Col. Cabdullahi uu u isticmaali doono inuu waxqabad la’aanta maamulkiisa uu eed uga dhigo raga ka soo jeeda beelaha aan raacsaneyn taladiisa.